Iska Hor-Imaad u Dhaxeeyay Ciidamo ka Wada Tirsan Dawladda oo Barqanimadii Maanta ka Dhacay Degmada Dharkeenleey.
Iska hor Imaad sababay khasaare isugu jira Dhimasho iyo Dhaawac ayaa barqanimadii maanta...
Date: 2012-01-08 09:42:35
Iska hor Imaad sababay khasaare isugu jira Dhimasho iyo Dhaawac ayaa barqanimadii maanta Askar ka wada tirsan Ciidamada Dawladda ku dhex maray Degmada Dharkeenleey ee Magaalada Muqdisho.
Mashaqadan ayaa timi ka gadaal markii Ciidamo ka tirsan Maamulka Degmada ay Isbaaro dhigteen qaybo ka mid ah degmadaas halkaasoo ugu danbayntiina ay yimaadeen ciidamo Boliis ah oo doonayay in ay halkaa ka qaadan Isbaarada.
Labada dhinac ayaa tacshiirad is weeydaarsaday taasoo keentay in halkaa uu ku dhinto mid ka mid ah ciidankii boliiska halka sedaxina ay ku dhaawacantay.
Is rasaaseyntan u dhaxaysey Ciidamada dawladda ayaa waxa ay sababtay in gbei ahaanba isu socodkii dadka iyo Gaadiidkuba ay istaagaan isla markaana ay xirmaan goobihii ganacsiga iyadoona dhaq dhaqaaqyadii oo dhan halkaa ay ka joogsadeen.
Meeydka Askeriga ku dhintay Dagaalkaas ayaa muddo halkaa yiil iyadoona ay suurta geli weeydey in halkaa laga qaado iyadoona laga cabsi qabay in ciddii isku deyda qaadistiisa ay dhibaato kala kulanto.
Dagaalka oo qaddar daqiiqada ah halkaa ka soconayay ayaa goor danbe iskiisa isu taagay iyadoo labadii dhinac ee dagaalamayna ayn muddo aag isugu jireen.
Wararkii u danbeeyay ee halkaa naga soo gaaray ayaa sheegaya in iminka xaaladdu deggan tahay isla markaana si tartiib tartiib ah xaaladdu ay dib ugu soo noqotay.
Ma jirin cid ka tirsan Maamulka Dharkeenleey ee arrintaa ka hadashay sidoo kale ma jirin cid ka tirsan Boliiska oo arrintaa ka hadashay tan oo aan ahayn markii u horeeyay oo ciidamo ka wada tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ay isku rasaaseeyaan gudaha degmadaas.
Inta badan iska hor imaadyada dhex mara askarta dawladda ayaa waxa uu khasaare ka soo gaaraa dadka rayidka ah iyadoo dib danabana aan wax laga isaga weeydiin dhibatadaas ay gaystaan ciidamada dawladda oo dagaalkoodu badanaba uu ka dhaco meelaha dadka Rayidka ah ay joogaan.
Si kastaba dagaalkii maanta ka dhacay degmada dharkeenleey ayaa waxa si aad ah uga xumaaday Dadka Rayidka ah ee halkaa deggan iyagoona ka codsaday dawladda ku meel gaarka in ay wax ka qabato arrintan soo noq noqotay.